Amazwe - I-TPAN - Ihlabathi ngoMatshi
Países – TPAN
Ikhaya » Países – TPAN
UMnqophiso onqandekileyo weZixhobo zeNyukliya
I 7 Julayi 2017, emva kweshumi yeyemisebenzi içan kunye namahlakani ayo, kukho uninzi kakhulu iintlanga zehlabathi yamkela isivumelwano esiyimbali jikelele lokuvala izixhobo zenyukliya, eyaziwa ngokusesikweni njengoko iSivumelwano phezu Ukuthintelwa Izixhobo Nuclear . Kuya kungena kumthetho ngokomthetho xa amazwe ase-50 asayine kwaye ayavuma.
Imeko yangoku yeyokuba kukho i-83 esele ityikityile kunye ne-50 eye yaqinisekisa. Sinciphisa i-0 yokungena ekusebenzeni, ekufikeleleni kwitotali.
Isicatshulwa esipheleleyo somnqophiso
Umbuso wokusayinwa / ukuqinisekiswa
Phambi kokuba sivumelwano, izixhobo zenyukliya aba izixhobo kuphela zokubulala abantu abaninzi ukuba bezingekho phantsi umlomo iyonke (ukuba izixhobo zeekhemikhali kwaye bacteriological), nangona neziphumo zazo ezibangele wokunceda abantu nokusingqongileyo ixesha elide. Isivumelwano esitsha sigqiba ngokugqiba isithuba esikhulu kwimithetho yamazwe ngamazwe.
Othintela iintlanga ukuphuhlisa, uvavanyo, ukuvelisa, ukwenziwa, ukutshintshwa, walihlutha, gcina, ukusetyenziswa okanye akoyikise ukusebenzisa izixhobo zenyukliya, okanye ukuvumela izixhobo zenyukliya endaweni yayo takwe. Kwakhona aluvumelekanga ukunceda, ukukhuthaza okanye ukubangele nabani ukuzibandakanya kuyo nayiphi na kwezi zinto.
Uhlanga olunezixhobo zenyukliya lunokudibanisa umnqophiso, ngokungakhathaliseki ukuba uyavuma ukuwachitha ngokuhambelana nesicwangciso esibophelelwe ngokusemthethweni nexesha. Ngendlela efanayo, isizwe esibamba izixhobo zenukliya zesinye isizwe kwintsimi yaso sinokubambisana, nje kuphela xa sivuma ukuzisusa ngexesha elithile.
Iintlanga ziyanyanzelekile ukuba zinike uncedo kubo bonke amaxhoba okusetyenziswa nokuvavanywa kwezixhobo zenuzi kunye nokuthatha amanyathelo okulungiswa kweemeko ezingcolileyo. Isiqalo siyaqaphela umonakalo ochaphazelekayo ngenxa yezixhobo zenuzi, kubandakanywa nempembelelo engabonakaliyo kwabasetyhini kunye namantombazana, nakwamanye amazwe kwisizwe.
Esi sivumelwano ke thethwana kwi kwikomkhulu yeZizwe Ezimanyeneyo eNew York ngoMatshi, Juni no Julayi 2017, kunye inxaxheba ngaphezu kwamazwe 135 kunye namalungu oluntu. I-20 Septemba 2017 yavulwa ukuze isayinwe. Kusisigxina kwaye iya kubophelela ngokusemthethweni iintlanga ezizibandakanya kuyo.
Ukubambisana ne-TPAN ukuba iqalise ukusebenza ngenye yezinto eziphambili kwi-World March ngoxolo noKhuselo.
Ixwebhu lokusayinwa okanye ukulungiswa